Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Caawa Oo Isniin Ah Qoreen Wargeysyada Yurub & Saxiixyadii Maanta La Dhameystiray – Laacibnet.net
Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Caawa Oo Isniin Ah Qoreen Wargeysyada Yurub & Saxiixyadii Maanta La Dhameystiray
RASMI: Arsenal ayaa kansashay qandaraaska xiddigii ay ku qasaareen Henrikh Mkhitaryan kaasoo si xor ah ugu biiraya kooxda Talyaaniga ee AS Roma oo uu amaah ugu ciyaarayay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
RASMI: Zlatan Ibrahimovic ayaa qandaraas cusub oo hal sanno ah u saxiixay kooxda AC Milan isagoo sannadkaas ka qaadanaya 7 milyan euro, waxaana la siiyay lambarka cusub ee No.11
Donny van de Beek oo ah xiddig khad dhexe oo si weyn loo raadinayay ayaa tijaabada caafimaadka u maray kooxda Manchester United isagoo tijaabada caafimaadka ku maray dalkiisa Holland ka hor inta uusan heshiis 40 milyan ginni uga soo wareegin kooxda Ajax.
Kooxda Manchester City ayaa heshiis shaqsi ah la gaartay maanta daafaca dhexe ee kooxda Napoli Kalidou Koulibaly, laakiin sida ay sheegtay majalada France Football kooxda Premier League ka dhisan weli wax dalab rasmi ah ma aysan u gudbinin kooxdiisa Napoli.
Xiddiga khadka dhexe ee Barcelona Arturo Vidal ayaa kulan la leh madaxda Barcelona isagoo doonaya in si bilaash ah lagu fasaxo xagaagan, waxaa xiddiga reer Chile sugeysa kooxda Inter Milan iyadoo tababare Antonio Conte uu muhiim u arko xiddiga khadka dhexe.
Sida ay sheegtay jariirada Corriere dello Sport, Patrick Schich ayaa ka tagi doona kooxda Roma isagoo baaqi ku ahaanaya Bundesliga laakiin lama uu sii joogi doono kooxda RB Leipzig uu amaah ku joogay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay taas bedelkiisa wuxuu heshiis 27 milyan euro ugu wareegayaa Bayer Leverkusen.
Waqtigii Mesut Ozil ee Arsenal ayaa ugu danbeyn soo dhamaanaya iyadoo jariirada The Sun ay sheegtay inuu dalab qaali ah ka helay kooxda Sacuudi Areebiya ka dhisan ee Al-Nassr.
Ivan Rakitic ayaa ku dhow inuu dib ugu laabto Sevilla oo uu ka tago Barcelona ka dib lix sannadood uu joogay kooxda Catalans. Xiddiga reer Croatia ayaa afar sannadood la joogay sannadkii 2010 ilaa 2014, wuxuuna haatan u saxiixayaa heshiis seddex sannadood ah.
Bayer Leverkusen ayaa aqbashay inay waayi doono labada xiddig ee ugu waa weyn kooxdeeda xagaagan.
“Uma maleynayo in Kevin Volland iyo Kai Havertz inay ku soo laaban doonaan tababarka” ayuu yiri tababaraha kooxda Peter Bosz maanta.
Monaco ayaa u muuqata mid la wareegeysa Volland halka Havertz uu ku biirayo Chelsea.
Sida ay sheegtay jariirada Talyaaniga ee Corriere dello Sport, Juventus ayaa dib u la soo saxiixan karta weeraryahanka da’da yar Moise Kean oo ay ka iibiyeen kooxda Ingariiska ee Everton.